Ha siinin dadka kale fasax inay waxyeelleeyaan maalintaada. - qarsoodi - Quotes Pedia
Ha siinin dadka kale fasax inay waxyeelleeyaan maalintaada. - Qarsoodi
Noloshu waa qaali. Dadka nolosheena ku jira waa kuwo gaar ah laakiin inta lagu gudajiro horumarinta cilaaqaad, waa inaanan waligeen is ilaawin. Waa inaan la xiriiraa baahiyadeena iyo mabaadi'da waqti kasta.
Maalin kasta oo nolosha ka mid ahi waa inay lahaataa ujeedo oo waa inaanu xakameynaa waxa aan rabno. Had iyo goor Suuragal maaha in la saadaaliyo waxa nagu dhici doona, laakiin waa inaanu isku daynaa inaanu nolosheenna ugu noolaanno sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Waa inaan maskaxda ku haynaa qorshe cad oo ku saabsan sida aan u jeclaan lahayn nolosheena inuu ku sii socdo muddada gaaban iyo muddada dheer. Sida iyo markaan aragno isbeddelada soo galaya, waa inaan la qabsanaa isla markaana aan dhaqaaqnaa. Dabcan, way fududahay in la yidhi intii la qaban lahaa laakiin waa inaan isku daynaa intii karaankeena ah si aan ula qabsano nolosha iyo isbedelada.
Iyada oo la raacayo la qabsiga iyo dhaqaajinta, dhammaanteen waxaan horumarinaa goobaabin dad ah oo aan isku xirnaaneynay. Laakiin waxaa jiri kara waqtiyo ay dadka qaarkiis noqdaan kuwa aad u xoog badan oo laga yaabo inay ka socdaan goobaheena gudaha lafteeda.
Marka, adiga oo ka bilaabaya mid kasta oo ka mid ah dibedda oo u malaynaya inay leeyihiin awood ay wax ku qabtaan, waa inaad ka fogaataa dhammaan dadka noocaas ah. Mararka qaarkood, sidoo kale waxaan helnaa nafteena jacayl aad u badan oo ah qof oo aan lumino xakamaynta nafteena. Waxaan u oggolaanay inay naga adkaadaan, iyagoo raalli ka ah.
Halkaan waa meesha xakameynta u baahan tahay in lagu dhaqmo waana inaan ka taxadarnaa inaanan waligeen qof kale gacan weyn ku siinin nolosheena si ay maalin uun inoo dumiyaan. Haddii aan karti u leenahay inaan maareynno qaabkan nolosha, markaa waxaan xakamayn karnaa nolosheena.
Xigasho wacan Subax Wanaagsan
Ha Murugoonin xigashooyinka
Xigasho Subax wanaagsan
Fikradaha wanaagsan ee maalinta
Xigashooyinka dhiiri galka ee maalinta
Quote Wanaagsan ee Maanta
Xigashooyin kusaabsan dadka noloshaada kujira
Soo koobid gaaban oo maalinta ah
Ka fikir Wixii xigashooyinka maanta
Xigashooyin aad u gaaban
Ujeeddo ayaad lahayd intaadan qof fikrad ka dhiibin. - Qarsoodi
Ujeeddo ayaad lahayd intaadan qof fikrad ka dhiibin. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Dadka ugu farxadda badan waa kuwa dadka kale farxad geliya. - Qarsoodi
Ilmanimadeenii hore runtii waxaa ka buuxa tusaalooyin soo jeedinaya in farxaddu ku jirto wadaagista ilahayada…
Ha ula dhaqmin dadka sidii wax xun, oo ula dhaqan dadka sida ugu wanaagsan oo kale. - Qarsoodi
Qaabka aad ula dhaqanto dadka ayaa go’aaminaya nooca qofka aad tahay! Waxay ka hadleysaa waxyaabo badan oo ku saabsan…
Ku mahadnaq dhammaan halganka aad soo martay. Waxay kaa dhigayaan xoog, xikmad iyo is-hoosaysiin. Ha u oggolaan inuu ku jebiyo ha kuu oggolaado. - Qarsoodi
Waxa jira wakhtiyo adag oo nolosheena ah, marka ay tahay inaan soo maro halgan badan.